အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း : လျစ်လျူမရှုသင့်တဲ့လက္ခဏာရပ်များ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း : လျစ်လျူမရှုသင့်တဲ့လက္ခဏာရပ်များ
ဧပြီ 28, 2018 Benjarat Promjunyakul, M.D.
ဆေးတွေသောက်သုံးပြီးတာတောင်၂ ပတ်နှင့်အထက် ကြာမြင့်နေတဲ့ အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ အသားအရည်ဖျော့သွားခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ခြင်း၊ အသားဝါလာခြင်းတွေက ကင်ဆာရောဂါအတွက် သတိပေးလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုမရှိပဲ အချိန်အကြာကြီးထိုင်နေတာကလည်း အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုသည် အဖြစ်များသော လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းက ပြင်းထန်ဆိုးရွားသောကိစ္စတစ်ခုရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးတွေသောက်သုံးပြီးတာတောင်၂ ပတ်နဲ့အထက် ကြာနေတဲ့ အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုတွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုတွေ၊ အသားအရေအရောင်ဖျော့သွားတာတွေ၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ခြင်း၊ အသားဝါလာတွေက ကင်ဆာရောဂါအတွက် လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းသည် လျစ်လျူရှုထားသင့်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။
အစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာက အစာအိမ် သို့မဟုတ် အူမှာ လေ သို့မဟုတ် အက်ဆစ် တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်တတ်ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ရခက်ခဲတာ၊ အစာအိမ်နာကျင်တာ၊ အစာမစားချင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ အက်ဆစ်တွရှိနေတာက အချို့သော အစားအသောက်စားနေတဲ့အချိန်၊ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အချိန် နဲ့ ပီကေစားတဲ့အချိန်တွေမှာ လေကိုပါ ရှုမိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ဆေးတွေကလည်း ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဖြစ်စေပြီးတော့ အိပ်ဆေးတွေ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေနဲ့ အခြားသော စိတ်ကျရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကလည်း ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။
တချို့သောသူတွေမှာတော့ နာတာရှည်အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ အစာအိမ် နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါတမျိုးမျိုးကြောင့်သော်လည်းကောင်း အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊ အစာအိမ်အနာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အူမကြီးကင်ဆာ, parasitic infection, irritable bowel syndrome, intestinal dysfunction တွေအပြင် Thyroid နှင့် ဆီးချိုရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံစားနေရတဲ့သူတွေအနေနှင့် အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှုကို ခံယူသင့်ပါတယ်။
အစာအိမ်လေပွခြင်းနှင့် အစာမကြေဖြစ်ခြင်းက အတူတူပဲလား ဒါမှမဟုတ် ကွာခြားသလား?
အစာအိမ်လေပွခြင်းနှင့် အစာမကြေဖြစ်ခြင်းများသည် အစာအိမ်ထဲမှာ အက်ဆစ်တွေအများအပြားရှိနေခြင်း၏ လက္ခဏာများဖြစ်ပြီးတော့ ရင်ခေါင်းတွင်းမအီမသာဖြစ်ခြင်း ရင်ပြည့်ခြင်း အစာစားပြီးသောအချိန်တွင် အစာအိမ်ပြည့်တင်းခြင်း၊ လေခဏခဏတက်ခြင်း၊ လေလည်လိုက်ပြီးသည့်အချိန်မှသာ သက်သာခြင်းအစရှိတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အကယ်၍ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း သတိထားရမယ့် လက္ခဏာတွေရှိနေပြီဆိုလျှင်တော့ အစာခြေဖျက်သောစနစ်ကို အကူအညီပေးနိုင်သော ဆေးကုသမှုခံယူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အစာစားသုံးတဲ့နည်းစနစ်ကို ပြောင်းလဲတာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ လက္ခဏာရပ်တွေက ဆေးသောက်ပြီးတာတောင် ၂ ပတ်နဲ့အထက်ကြာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အစာခြေဖျက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ အဆီများတဲ့အစားအစာတွေကို ရှောင်ကျဉ်ပါ
လှုပ်ရှားမှုမရှိပဲ အချိန်အကြာကြီးထိုင်နေတာက အစာအိမ်ကို လေပွစေနိုင်ပါတယ်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအားကစား ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ
အစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာကို ကုသမှုမပြုလုပ်ပဲမနေပါနဲ့။ အခုလိုရောင်ရမ်းတာက ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်မရှိခြင်းမဟုတ်ပဲ အခြားသောအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဂရုမူပါ။
အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း : လျစ်လျူမရှုသင့်တဲ့လက္ခဏာရပ်များ အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုသည် အဖြစ်များသော လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းက ပြင်းထန်ဆိုးရွားသောကိစ္စတစ်ခုရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးတွေသောက်သုံးပြီးတာတောင်၂ ပတ်နဲ့အထက် ကြာနေတဲ့ အစာအိမ်ရောင်ရမ်းမှုတွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုတွေ၊ အသားအရေအရောင်ဖျော့သွားတာတွေ၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ခြင်း၊ အသားဝါလာတွေက ကင်ဆာရောဂါအတွက် လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းသည် လျစ်လျူရှုထားသင့်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။
User rating: 3.20 out of5with 51 ratings